ပေါက်ကွဲသံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပေါက်ကွဲသံ
Posted by thihayarzar on Jun 7, 2012 in Creative Writing | 22 comments
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘာသာအသီးသီး နေထိုင်ကြသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်သည် .. လွက်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့် ကို အစိုးရနှင့် တကွ ပြည်သူပြည်သားများမှ နားလည်ခွင့်လွှက်ပေးထားပါသည် … ဘာသာအမျိုးမျိူးရှိကြပါသည် … ကျွန်တော်တို့ ကလည်း လွက်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါသည် …. ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ ဘာသာဝင်များကတော့ စည်းကမ်းဥပဒေကို မလိုက်နာပဲ လွက်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး မြန်မာမိန်းကလေးများကို သူတို့ ဘာသာထဲရောက်အောင် လုပ်နေတာကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေ လစ်လျူရှု့ နေမယ်ဆိုရင် နောင် နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ဝ ထိအောင် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ်ဓ ဘာသာသာသနာဟာ တည်တံနိုင်ပမလား .. ကျွန်တော်တို့ လ ို နောင်ဘဝကို အရေးမထားပဲ ကုလားကိုသာ သတ်ချင်နေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိဦးမှပဲ …ရခို်င်သားတွေကို ချီးကျူးတယ်ဗျာ .. ခင်ဗျားတို့သာ မျိုးချစ်စိတ်မရှိရင် ကုလားတွေ ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ပေါနေတော့မှာ …. မသီတာထွေး ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်တာကို ဒေါသဖြစ်ပေမယ့် ကုလား ၁ဝ ယောက်ကို သတ်တာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ …. သူတို့ က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆို မသီတာထွေးကို သတ်ကတည်းက ဆန္ဒပြပါ့ လား …. သူတို့ ကုလားတွေ သတ်ခံရတော့မှာ ဆန္ဒပြနေကြတာ သဘာဝ မကျဘူးဗျ ….. ကုလား ၁ဝ ယောက်အသတ်ခံရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး …. အဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာ … အမှန်ဆို အကုန်မောင်းထုက်ရမှာ …. အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ က ဗုဒ်ဓ တရားတော်များကို မလိုက်နာသလိုဖြစ်နေတော့မယ် .. ကမာ္ဘအကောင်းဆုံး ဘာသာဆုကို ရထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာကို ညစ်နွမ်းအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့ ……………..
တရားသော နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းပါ … ဘာသာတရားကို စော်ကားသလို ဖြစ်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့ …… ဗုဒ်ဓဘာသာပီပီ တရားတော်များကို လိုက်နာကြပါ ……
ကျွန်တော်တို့ ရွာတွင် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခြားသော ရွာများတွင် လည်း ဒီတစ်ပတ်မှာ တော်တော်ကို အသံတွေစုံသွားကြတော့သည် … သူကြီးနဲ့ ရွာသားများကိုလည်းပြောချင်ပါတယ် ဒီလိုပြသာနာတွေ အနည်းအများတော့ ထိခိုက်ခံရမှာပဲ … ဒီလောက်ကြီးတဲ့သတင်း မသိတဲ့သူမရှိရအောင် ပြောပြတာ မမှားပါဘူး …. ဖြစ်တက်ပါတယ် ….. အားလုံးနားလည် စေချင်ပါတယ် …. အားလုံးကလည်း ခံစားလိုက်ရတဲ့စိတ်တွေကို နှစ်ဖတ်မျှတွေးပြီး စဉ်းစားနားလည်ပေးပါ … မိမိ အသက်ကိုအောင် ပဓာန မထား ဘဝရှေ့ ရေးကိုတောင် မတွေးမိပဲ လုပ်လို်က်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကဲရဲ့ နေစရာမလိုပါဘူး … သူတို့ လို ခင်ဗျားတို့ လုပ်နိုင်လား … ပြောချင်တာတွေတော့ အများကြီးပဲဗျာ .. သူကြီးနဲ့ ရွာသားအပေါင်း ကျွန်တော်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ … ခွင့်မလွှက်နိုင်ရင်လည်း လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာသာ လုပ်ပါတော့ ………………
မျှတသော အတွေးနဲ ့တွေး၍ ဘက်မျှအောင်ချင့်ချိန်စေလိုပါတယ်။ကိုသီဟရာဇာရေ
စိတ်အနှောက်ယှက် လုံးဝ မဖြစ်ပါဘူး
နောက်ပြီး သဂျီးကလဲ တင်ချင်တဲ့စာ တင်
ကိုယ့်စာကိုယ် တာဝန်ယူရင် okလို့ပြောထားပါပြီ
ဆိုတော့ ဆက်ပြီး တင်ပါ
ကျွန်တော်ရေးသောစာများအတွက် အကုန်တာဝန်ယူပါတယ် … ရှိ်တဲ့အိမ် ပေါင်ရော်ရမလား … မရော်နိုင်ပဲ ထောင်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျမလား … အေးဆေးပဲ …. အသက်ပါ ပေးတယ်ဗျာ … မဆိုင်တာတွေ မပြောနဲ့ .. .
အကောင်းစေတနာနဲ့ မင်း ရေးချင်တာ ရေးတင်လို့ရပြီဆိုတာ ကွန်မင့်ပေးတာ။
အေးလေ… ကိုကြီးပေက အကောင်းနဲ့ အားပေးတာကို
ဘာတွေးပြီး ဘယ်လို ဟောင်တာလဲ…
အခုတလော ပေါက်ပေစီဂီ့ကို မကြည့်တဲ့ကောင်တွေ
များလာဒလားမတိဘူး… အကောင်းပြောရင်း အားပေးနေတာတောင်
ကိုယ်လိုရာ ဆွဲတွေးပြီး ပလိန်းကြီးတွေ လာခွတ်နေတယ်..
ကျော်ချင် ခွချင်ရင် ဆိုက်ကားသာနင်းလိုက်တော့
သီဟ = ခြင်္သေ့ ဆိုတာ မဟောင်တတ်ဘူး.. အိုင်ပီရေ..
ဦးပေ နဲ့ ကိုရင်စည်သူ ကငါနဲ့ ခံစားချက်ချင်း ဂျက်ပင်ထိုးထားပါတယ်။
အရမ်းလွန်သွားရင်လဲ ဟစ်တလာလို ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ငါရေးတဲ့ကော်မန့်တိုင်းပြန်ကြည့် အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ အတွက်ချည်းပါဘဲကွ။
ဝုတ်ပါ့ ဝုတ်ပါ့ … ဟိဟိ ဂျက်ပင်ထိုးထားတာတဲ့ ကိုမိုးတိမ်နဲ့ ကိုရင်နဲ့ ..
ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် စည်းရုံးမယ်ဆိုရင် ပါးပါးနပ်နပ် ရှိဖို့တော့ လိုမယ် ..
စေတနာဖြင့် .. မှော်ဆရာ
reality အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံရရင် ကျွန်တော်တို့က စတော့မကျူးလွန်တာတော့ အမှန်ပါ။
ရခိုင်က ရခိုင်သားတွေကလဲ ပြန်လည်တောင်းပန်ပေးလိုက်ပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က သစ်ထူးလွင်မှာတောင်းပန်ကြောင်းစရေးပြီး ဖြန့်နေပါပြီ။
ဒီတော့ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေး ကြေအေးကြစို့ရဲ့။
အရင့်အရင်က ဟာတွေမပြောကြကြေး နှစ်ဘက်လုံးမှားခဲ့ပြီကိုး။
သို့ပေသိ သမိုင်းမှာတော့အမည်းစက် မစွန်းအောင်လုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။
ကိုယ့် သမိုင်းကို သေသေချာချာသိပြီး လက်ခံပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းးးးးးးးးးးးးးးး
ဆရာသမား ပြောထားတာကတော့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ…. ဒါပေမယ့်.. ကိုယ့်ဆရာက ဗုဒ္ဓဘာသာ လေး ရေးတာတော့ သေသေချာချာလေး ရေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်… တစ်မျိုးတော့မထင်ပါနဲ.ဗျာ… ကဲ့ရဲ.တာမဟုတ်ပါဘူးနော်….
ဗုဒ္ဓ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးမှားတာများကွာလို. ပြောစရာရှိချင်ရှိလိမ့်မယ်…. ဒါပေမယ့်ဗျာ..ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံမှာ အဲလို အသေးအဖွဲလေးတွေကို ဂရုမစိုက်ကြတော့… အကြီးကြီးတွေ မှားနေကြတယ်လေ……….
ကျွန်တော်တို. ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေ ကိုယ်ဘာသာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိထားရင် သူများဘာသာတွေက ကဲ့ရဲ.မခံရတာပေါ့ဗျာ… စေတနာပါနော….
ဗုဒ္ဓ ရေးနည်း။။။။။ ကီးဘုတ်မှ Shift + A = ဗ , k =ု, ‘ (singal code) = ဒ , အောက်အဆင့် ဓ ကိုတော့ နှစ်မျိုးရှိသဗျ
တစ်မျိုးက Ctrl + Shift + Alt + ‘ (Singal Code) ဗုဒ္ဓ ဖြစ်ပြီပေါ့…
သူများတွေကအကောင်းပြောတာပဲဗျာ ဘာလို့ မဆိုင်တာတွေမပြောနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကတော့
လူစကားနဲ့တောင်မတူဘူးဗျာ ခွေးကိုခေါင်းပွတ်ပေးတာ ထပောာင်တဲ့ခွေးယုတ်နဲ့တူနေသလားလို့
အမှားလေးများပါသွားခဲ့ရင် လည်းမတောင်းပန်ပါရစေနဲ့နော် မှန်တာပြောတာ…..ပာီး
အာဏာပိုင်တွေနဲ ့ပေါင်း လုပ်စားနေတာဘဲသူလဲ တောင်ကုတ်သား
ခရိုနီ ဆိုတာကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။တောင်ကုတ်မြို့မှာ ဦးကျောက်တောင်က ခရိုနီဘဲ။
သမ္မတအဆင့်၊ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊စစ်တိုင်းမှူး၊ဗျူဟာမှူးဆိုတာ သူ ့လူတွေဘဲ။သူခိုင်း
တာလုပ် သူကျွေးတာစားထားကြလေတော့။မပြောလဲ သိနိုင်လောက်ပါပီ။
သံတွဲဒေသခံတွေက နစ်နာသူတွေကို ပြန်ကူညီဖို ့၊အားပေးနှစ်သိမ့်နေယုံဘဲ တတ်နိုင်
တယ်။တောင်ကုတ်မှာ တရားခံတွေကို ပြေးနိုင်၊ပုန်းနိုင်အောင် အချိန်ဆွဲနေတယ်။
အဲတော့. ဘယ်သူက လူလိမ်ဆိုတာ သိရော့ပေါ့။ခွဲခြား သိမြင်နိုင်ပါစေ။
ကျနော်တို့အမျိုး မုဒိန်းကျင့်ခံရတုံးက အဲဒီကောင်တွေ တရားခံဖော်ထုတ်ပေးခဲ့လို့လား ကုလားသတ်မှလာပြီးအော်ပြနေတယ်
အဓိပ္ပာယ်ကောက်တာ လွဲသွားတဲ့ အတွက် ကိုပေ ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ….. ကျွန်တော်လည်း စိတ်တွေ ထိန်းမရလို့ ဒေါသရှေ့ထားပြီး မှားသွားတာပါ …. ကျွန်တော်တို့ရွာကကော အခုလိုဖြစ်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲ …. သူကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကူညီသင့်တာတွေ ကူညီကြရအောင် … အခုဆို ပြသာနာက တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာပြီ … ဘာသာရေး အပြင် နိုင်ငံရေးတွေပါ ပါလာနိုင်တယ် ….
ဘာသာရေးနဲ ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်လာခဲ့ဖူးတာ စစ်ခွေးတွေအလုပ်မို ့စစ်ခွေးတွေပိုသိပါတယ်။
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ က ဗုဒ်ဓ တရားတော်များကို မလိုက်နာသလိုဖြစ်နေတော့မယ် .. ကမာ္ဘအကောင်းဆုံး ဘာသာဆုကို ရထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာကို ညစ်နွမ်းအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့
အပေါ်မှာရေးထားတာနဲ့ အခု ကျတော် bold လုပ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဆက်စပ်မူကင်းနေသလိုပဲ။ ဘာလဲ ဗုဒ္ဓက ကုလားဆို အကုန်မောင်းထုပ်ဖို့ဟောခဲ့လို့လား။ အစွန်းနဲနဲထွက်နေတယ်လို့ ခံစားရတယ်ဗျာ။ Balance ညီတော့ လှေစီးရင်တောင် လူးတဲ့ဒဏ်မခံစားရဘူးပေါ့။ ခုတော့…………………………ဆူးလှည်းကြီးလမ်းပေါ် စည်းကမ်းမဲ့မောင်းနေသလိုပဲ။
“ကမာ္ဘအကောင်းဆုံး ဘာသာဆုကို ရထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ” ဆိုတာ တကယ် မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက် က ညာပြီး လွှင့် ထားတာပါ။
အမှန်တော့ ကိုယ့်လူမျိုး/ဘာသာ ကို ထိပ်တန်းတင်ဖို့ သူများ လူမျိုး/ဘာသာ ကို နှိမ့်ချနေသမျှ၊
ကိုယ့် လူမျိုး/ဘာသာ မှ အကောင်းဆုံးလို့ အမြင်ကျဉ်း နေကြ သမျှ
ကမ္ဘာ ကြီး မှာ စစ်ပွဲတွေ ဘယ်တော့မှ ဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တန်ဖိုး မဲ့ တဲ့ အမုန်းတွေ၊ အာဃာတတွေ ကြားမှာ အပြစ်မဲ့ သူတွေ မြေဇာပင် ဖြစ်နေရဦး မှာပါဘဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိမြင့် တဲ့ လူမျိုး/ဘာသာ လို့ ယူဆ ရင် သူများရဲ့ လူမျိုး/ဘာသာ ကို လဲ လေးစားပါ။
မဟုတ်ရင် အဲဒီ လူမျိုး/ဘာသာ ဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ လူမျိုး/ဘာသာ ပါဘဲ။
အတော်လေးကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့၊ အသုံးမကျတဲ့ လူတွေ ကို သိရင် ရှောင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ဒီအချိန်မှာ ဥပဒေမဲ့ လုပ်နေရင် ဘယ်သူ့ ကိုမှညှာစရာ မလို ဘူး ဆိုတာ တာဝန် ရှိသူတွေ သိဖို့ကောင်းတယ်။
သူတို့ အရည်အချင်း ရှိ/မရှိ။ ဘယ်လောက် ကိုင်တွယ်တတ်သလဲ၊ ကိုင်တွယ်နိုင်သလဲ ကြည့်နေပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ သူရဲကောင်း ဘယ်သူဖြစ်မှာလဲ?
အစိုးရရဲ့ ထိပ်ပိုင်း လူတစ်ချို့ ဟာ တကယ်တော့ မညံ့ပါဘူး။
တစ်ခုခု ကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြပါ။
ဒီ အတိုင်း ကြည့်မနေကြပါနဲ့ ရှင်တို့။
လှေတစီးအတူစီးနေကြပြီး ကျောခိုင်းလှော်ခဲ့ လှော်နေကြတုန်း
ဘာသာတရားတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် အဲဒီဘာသာအကြောင်းကို သေချာလေ့လာပြီးမှ ပြောစေချင်ပါတယ်
ရမ်းပြောမယ်ဆိုရင် ပြောတဲ့လူရဲ့ သိခါ ကျပါတယ်
တကယ်တမ်းဆိုရင် အစလာမ်ဘာသာမှာ လက်ထက်ပြီးမှ ဝင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး
ဘာသာထဲကို ဝင်နိုင်တယ်ဆိုမှ လက်ထက်ခွင့်ပေးတာပါ
မဝင်နိုင်ရင် မယူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ
ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ ဘယ်ဘာသာတရားကမှလည်း ခွင့်ပြုမထားပါဘူး
အဲဒါကိုမကြိုက်တာပေါ့ဗျာ …. ကုလားလေးကသဘောကောင်းလို့ သူကိုပဲ ချစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပြောမရဆိုမရ အမျိုးယုက်မတွေကြောင့်ပေါ့ … ကုလားကမေးတယ် ငါ့ကိုယူရင် ကုလားဘာသာကိုးကွယ် ရမယ်လို့ပြောတာကို အင်း ကုလားကိုယူမယ်တဲ့ …. အဲလိုလူမျုးိတွေ အများကြီးဗျာ ……နာလို့မပြောတာ … ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ကုလားမကိုယူရင် အဲလိုမပြောဘူးဗျာ … လွက်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ် … အဲဒါပြောတာ …. ငါ့ယူရင် ငါတို့ဘာသာကိုးကွယ်ရမယ်ဆို့တဲ့ စကားလုံးကို အမုန်းဆုံးပဲ …. ဒါလား လွက်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ …ဒါ အကျပ်ကိုင်တာပဲ .. ခိုးရာလိုက်ပြေးပြီး ပြန်အပ်တော့မှ ဒီစကားပြောတာ ခင်ဗျားတို့နှမဆိုရင်ကော ခင်ဗျားလွက်လပ်စွာလို့ပြောဦးမလား ..
ငါ့ယူရင် ငါတို့ဘာသာကိုးကွယ်ရမယ်ဆို့တဲ့ စကားလုံးကို အမုန်းဆုံးပဲ …. ဒါလား လွက်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ …ဒါ အကျပ်ကိုင်တာပဲ .. ခိုးရာလိုက်ပြေးပြီး ပြန်အပ်တော့မှ ဒီစကားပြောတာ ခင်ဗျားတို့နှမဆိုရင်ကော ခင်ဗျားလွက်လပ်စွာလို့ပြောဦးမလား .. I agree with U